Dhuxul | November 2019
Sida loo koro jilibka dacha
Hyacinth waxay noqon kartaa mid beerta guriga ah, iyo beerta labadaba. Raccaalayaasha ayaa bilaabay inay Bloom hore ee guga. Ubaxyada waa kuwo aad u dhalaalaya oo udgoon. Haddii aan ka hadalno Rinkebyada casriga ah, waxay ku dhufan karaan maskaxda leh kala duwanaanta midabka - laga bilaabo caddaan illaa maroon-madow, casaan iyo guduud. Hyacinth waa ubax badan oo ku haboon oo loogu talagalay wakhtigii ku qasbaya iyo manjooyin.
Muscari (Eubotrys, Botryanthus) waa warshad dilaac ah oo qashin ah, oo sidoo kale loo yaqaano "boodhka baska" iyo "jilifka jiirka". Xaaladaha dabiiciga ah, waxay ku koraan xayawaanada buuraha iyo keynta ee Crimea iyo Caucasus, gobolka Mediterranean, koonfurta iyo bartamaha Yurub, iyo Aasiyada Yar. Warshadu waxay noqotay mid aad u caan ah sababtoo ah muddooyinka ubaxyada hore ee muruqyada, marka la barbardhigo ubaxyada kale ee guga.
Ka dib marka qaboobaha iyo qaboobaha qabow, waxba waxba kor uma qaadi doonaan jinniyadaaga sida guga asaasiga ah ee u horeeya ee barafka iyo barafka horay u socodka guga. Ubaxyada hore waxay u adkaystaan ​​qabow, aan qabyo ahayn isla markaana ku dhufanayaan si dhakhso ah. Thanks to dhammaan sifooyinkaas, waxay aad u fiican yihiin qurxinta xagaaga xagaaga, beeraha, geesaha, iwm.